Nagu saabsan - SUNKON Technology Intelligent Co., Ltd.
Kooxda iibka kadib
SUNKON waa soo saare xirfadle ah oo ka sameysmada qalabka wax lagu qariyo ee galaaska ku jira Shiinaha. Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarida mashiinada wax lagu farsameeyo galaaska. Tusaale ahaan: Mashiinka Mashiinka Tooska ah ee Tooska ah, Mashiinka Mashiinka Tooska ah ee Beveling, Mashiinka Tooska ah ee Double Edging Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Wareegsan ee Wareegga ah, Mashiinka Mashiinka Beveling ee Mashiinka ah, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka, Dhalada Mashiinka Dhalada, Mashiinka Mashiinka Sandblasting iyo wixii la mid ah. waxaan leenahay qalab wax soo saar oo casri ah, qalabka baaritaanka tayada oo sax ah, qaabeyn xoog leh iyo wax soo saar.Waxaan dammaanad qaadeynaa tayada cillada "eber".
Waxaan isku xilqaamaynaa inaan siino macmiisha qalab kaamil ah oo muraayadaha ah, iyadoo lala kaashanayo ruuxa ganacsi ee ah "adag, suugo, horumar, hal-abuurnimo". "Marnaba kuma qanacsana, inaad si fiican u baacsato" waa halheyskeena. adiga! Mashiinada muraayadaha SUNKON waxay ka isticmaalayeen aduunka oo dhan sida USA, Australia, Turkey, Mexico, Brazil, Russia, Kazakhstan, Armenia, Syria, Saudi Arabia, lran, Morocco, Tunisia, Cambodia, Thailand, Philippines, Vietnam, India, Pakistan iyo iwm. Si guul leh ulashaqeeyeen in kabadan 1000 soosaarayaasha soo saaraya muraayadda waxayna keeneen in kabadan 4500 qalabka SETS gudaha iyo dibada.
Waxaan ku yaal bartamaha Aasiya, oo leh siyaasad isku mid ah iyo wareegga habboon. Suuqa caalamiga ah, waxaan ku leenahay khibrad ganacsi oo qaan gaar ah.
Xaaladaha ku habboon awgeed, sidoo kale ka-qaybgalka firfircoon ee bandhigga caalamiga ah iyo saamaynta ballaadhan ee ballaadhan, waxay ku habboon tahay shirkadeena si loo dardar-geliyo horumarinta iyo kor u qaadista ka ganacsiga mashiinnada muraayadaha.Waxaan sidoo kale helnaa dhowr shahaado caalami ah oo awood leh, sida CE, SGS , iwm
SUNKON (CGTECH) waxay diirada saareysaa cilmi baarista iyo horumarinta mashiinada muraayadaha iyo teknoolojiyada. In ka badan 10 sano ka hor, waxaan sameynay xarunteena gobolka R & D, waxaan ku adkeysaneynaa horumarinta iyo hagaajinta mashiinada markasta. Ilaa hada, Waxaan si guul leh u wada shaqeyney in ka badan 1000 soo saare wax soo saar galaas oo aan keeney in ka badan 4500 wuxuu dejiyaa qalab gudaha iyo dibedda ah.
sanadahan, mashiinnada SUNKON (CGTECH) waxay sumcad wanaagsan ka heleen macaamiisheena labada Shiinaha iyo suuqyada adduunka.
SUNKON (CGTECH) waa soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada mashiinnada wax lagu farsameeyo galaaska, oo leh 5,000m2 oo dhir ah. In ka badan 3 farsamo-yaqaanno & injineero khibrad weyn u leh labadaba naqshadeynta mashiinka iyo ka-shaqeynta dhalada in ka badan 15 sano, in ka badan 50 shaqaale xirfad leh. Waxaa la aasaasay nidaamka maareynta wax soo saarka ee saxda ah iyo nidaamka kormeerka tayada adag iyo nidaamka kormeerka, faahfaahin kasta oo ka mid ah mashiinadeena sida ugu macquulsan ee lagu gaari karo xaqiijinta tayada cillada "ZERO".